कुदुको खानेपानी समस्या ः चुनाव पछि कहाँ पुगे समाधानका लागि प्रयासका मार्गहरु ? – Nepalpostkhabar
कुदुको खानेपानी समस्या ः चुनाव पछि कहाँ पुगे समाधानका लागि प्रयासका मार्गहरु ?
नेपालपाष्ट खबर । ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:१४ मा प्रकाशित
जाजरकोट , ३ कात्तिक ः वाम एकता गरि चुनावी मैदान जाँदा तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको नारा थियो , भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा खानेपानी पुर्याउने ? तर उनी सोही नाराले वनमन्त्री भइ सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् ।
भेरी करिडोर अन्तरर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम चौरजहारीको बीचमा पर्ने यो ठाउँमा मध्यपहाडी लोकमार्गको मुख्य भागमा समेत पर्दछ । महत्वपूर्ण भूभागको बीचमा पर्ने भएकाले सबैलाइ चुनावी नारा बनाउन समेत यो ठाउँले सहयोग गर्दै आएको छ । ठाउँको नाम बिक्री गरेर शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री बने तर यस ठाउँका जनताले घर , आंगनमै ठुक्क सँग पानि भने अझैँ पिउन पाएका छैनन् । झण्डै ५० लाख बराबरको लागतमा डिप बोरिङ गरि निकालिएको पानी भर्न कुदुका सर्बसाधारणहरु विहानै देखि बेलुकी सम्मा लाइन लागेर पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यत्ता पुर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले कुदुको खानेपानी घोषणा पत्रमा मात्र होइन अव परिणाममा समेत आउन लागेको बताएका छन् । सबै काम हुन्छ भन्ने तर परिणाममा कहिले देखिन्छ भन्दा उनले भने ‘ पहिलो चरणमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि झण्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरी काम नै सुरु भएको छ । अर्को वृहत खालको योजना सम्पन्न गर्नका लागि ३६ करोड बराबरको डिपिआर पुरा भएर तिहार लगत्तै बोलपत्र आवह्वान गर्न लागेको छ । ’ उत्ता संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख नारायण काफ्ले पनि सो कुराको पुष्टि गरे ।
यहीँ बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरु पानी भर्नका लागि लाइन लागेका सर्बसाधारणहरुको ताँती देखेर अनौठो मान्दै तस्वीर लिनको भीडा लाग्ने समेत गरेको छ । हाम्रो ठाउँको बेइजत गर्ने भन्दै कुदुबासीहरु रिसको सिमा नै नाघने गरेको बताउँदै आएका छन् । झण्डै तीन सय घरभुरी रहेको यो ठाउँको साइटबाट भेरी नदी बग्ने गर्दछ । भेरी नदीको पाल्लो छेउमा नयाँ सहर बन्दै गरेको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी रहेको छ । जाजरकोट खण्डमा भने पानी नपाएर बिहानै देखि पालो कुरेर बस्नु पर्दा हैरान हुने स्थानीय नरबहादुर बस्नेतले बताए । बस्नेत भन्छन् , ‘ यहीबाटो भएर जाने अधिकांश सर्वसाधारणहरु ठाउँ त राम्रो हो ,तर पानी नहुँदा बस्न मुस्किल रहेछ । यस्तो ठाउँमा छोरी विहे समेत नगरोस भनेको सुन्दा रिस उठेर आउछ ।’
तीन सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको कुदु सडकको हबको रूपमा स्थापित भए पनि खानेपानीको अभावमा यहाँका सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर छ । कुदुले जिल्लाभरिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । नजिकै भेदी नदी, समथर भूभाग भए पनि सिँचाइको अभावमा खेतीयोग्य जमिनमा अपेक्षित उत्पादन हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक दिन भेरी नदीको किनारमा धमिलो पानी ल्याएर परिवारको तिर्खा मेटाउँदै आएकी पानमती विक पानीको दुःखले दिक्क भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘फोहोर पानी पिउँदा हप्तामा एकपटक परिवारका सदस्य बिरामी हुन्छन्, जानेरै फोहोर पानी पिउन बाध्य छौँ ।’
आँखाले सङ्लो देखिने पानीलाई सफा भनेर पिउँदै आएका जाजरकोट कुदुका सार्वसाधारणले पानीका लागि धेरै ठाउँमा गुहार मागे । खास परिणाम आउने खालको व्यवस्थापन कतैबाट पनि नहुँदा कुरा मात्र कति सुनाउनु भन्दै दिक्क लागेको कुदुका श्याम विकले बताए । उनले भने, ‘भेरीको भेलमा हामीले पानी भरेर ल्याएको तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, यसको फोटो खिचेर नेताहरूलाई जसरी नि देखाइदिनुहोला , चिल्ला गाडीमा नेताहरु आउने बाटो यही भएपनि उनीहरुले देख्दैनन ।’
यही गाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेता केन्द्रीय राजनीतिमा छन् । वर्षौंदेखि आफूहरूले राखेको सानो खानेपानी माग पूरा नहुँदा सर्वसाधारण निराश छन् । कुदुमा पानीको समस्या नौलो नभएको बताउँछन् स्थानीय शेरबहादुर बस्नेत । बोरिङ गरेर निकालिएको पानीले एक घन्टा मात्र आउने पानीले कुदुका सर्वसाधारणलाई छेउ, टुप्पो केही नपुग्ने सर्बसाधारणको प्रतिक्रिया छ ।
झन्डै तीन सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको कुदुमा यो पानी हातीमा मुखमा जिरा भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको ठुलो ताती भेरी नगरपालिकामै छ तर हाम्रो समस्या समाधान किन हुँदैन अर्का लोकेन्द्र रोकायले बताए । उनले भने ,‘ माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत , मायाप्रसाद शर्मा ,कालीबहादुर मल्ल , रामदिप आचार्य , एमालेका निरज आचार्य , कांग्रेसका मुक्ती आचार्यको घर समेत यही ठाउँमा पर्छ । ’
सिँचाइ भए जिल्लालाई खाद्यान्न आपूर्ति हुने
भारी मात्रामा खेतीायोग्य जमिन भएपनि आकाशे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको छ । कुदु जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खेतीयोग्य फाँट भए पनि आकाशे पानीको भरमा यहाँका कृषकहरू खेती गर्दै आएका छन् । पिउने पानी नभएको ठाउँमा सिँचाइको सुविधा हुनु यहाँका लागि टाढाको कुरा हो । सयौँ बिघा जमिन आकाशेपानीको भरमा खेती गर्दा अपेक्षित मात्रामा उब्जाउ हुन नसकेको स्थानीयवासी हरि बस्नेतले बताए ।
भेरी नदीबाट पानी निकालेर सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको भए पूरै जिल्लालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने कृषकहरू बताउँछन् । नजिकै रहेको भेरी नदीको पानी सदुपयोग हुन सकेको छैन । यत्ता पुर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले कुदुको खानेपानी घोषणा पत्रमा मात्र होइन अव परिणाममा समेत आउन लागेको बताएका छन् । सबै काम हुन्छ भन्ने तर परिणाममा कहिले देखिन्छ भन्दा उनले भने ‘ पहिलो चरणमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि झण्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरी काम नै सुरु भएको छ । अर्को वृहत खालको योजना सम्पन्न गर्नका लागि ३६ करोड बराबरको डिपिआर पुरा भएर तिहार लगत्तै बोलपत्र आवह्वान गर्न लागेको छ । ’
उत्ता संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख नारायण काफ्ले पनि सो कुराको पुष्टि गरे । उनले भने ,‘ कुदुको खानेपानी समाधानका लागि तिहार लगत्तै जाजरकोट आएर कामको तालनी गरिने छ , म आफैँ आएर फिल्ड अनुगमण गर्ने कार्यक्रम छ । ’